White Hat uye Black Hat SEO Yakatsanangurwa Ne Semalt Expert
Pane nzira dzakawanda dzinogona kushandiswa kugadzirisa nzvimbo yewebsite panzvimbo dzekutsvaga mapeji emagetsi. Kusarudzwa kwegadziriro kunogadza kuti rudzi rwekutsvaga injini yekugadzirisa chii White Hat SEO kana Black Hat SEO . Zvose izvi izvi zvinokupa mhinduro, asi imwe inowanzokwezva chirango kubva kune injini kupfuura imwe. Zvakakosha kuti vashandi vepawebhuku vanyatsonzwisise idzi mbiri dze SEO kuitira kuti pavanosarudza chero ani zvake ivo vanoziva zvavanotarisira uye pangozi yavanotora - used boat blue book kelly.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt Digital Services, anotsanangura pano musiyano pakati pezvinhu zviviri izvi zve SEO.
White Hat SEO inoshandisa nzira dzinotarisa vateereri vevanhu kunze kwevanjini. Izvo zvakagadzirirwa kuita zvirongwa zvehupenyu kunzvimbo nehutano (hwewebsite uye zvakagadzikana) zvakakosha zvikuru. Aya maitiro uye mazano anosarudzwa nekuvandudzwa kwenguva refu kwehuwandu hwewebsite uye naizvozvo bhizinesi.
White Hat Mhando dzeSOO dzinosanganisira kuchengetedza hukama hwepamusoro-soro, kusikwa kwezvakagadzirwa uye zvakagadzirwa, zvakakodzera kushandiswa kwemashoko, uye sangano rakanaka renzvimbo. Kunyanya kunobatanidza mishandirapamwe inoshandiswa kuunza magwara panzvimbo ino asi zvigumisiro ndezvenguva refu..
Black Hat SEO inosanganisira kushandiswa kwemaitiro ane chinangwa chekutora zvishoma nezvishoma kushaya simba mune yekutsvaga injini yekugadzirisa kuti zvive zvakakwirira kutsvaga rankings. Iyo nzira dzisingabhadhari kutarira kune vateereri vevanhu uye kazhinji kuputsa mitemo yekutsvaga injini. Black Hat Hat SEO inofungidzirwa kusina tsika nemajini. Kushandisa nzira idzi, saka, inoisa nzvimbo yacho pangozi yekunyoresa nemajini aya, uye chirango chinogona kuva chinotyisa sechirambidzwa kubva kune injini yekutsvaga. Izvi zvinowanzoshandiswa nevanhu vanoda kuwanikwa nokukurumidza pawebsite asi panzvimbo yekuwedzera nzvimbo yacho zvishoma nezvishoma.
Mamwe maitiro emhando yeAIDS yeSeo inosanganisira mashoko ezvinyorwa, zvinhu zvinogadzirwa, cloaking, mapeji emasuwo, uye zvisingaoneki kana zvinyorwa
Mukuita, SEO vadzidzisi vanoshanda munzvimbo yakaoma iyo mashandisirwo akashandiswa haasi pachena White hat SEO kana Black hat SEO. Izvi zvakaita kuti kuberekwa kweimwe rudzi rwe SEO kunonzi Grey hat SEO. Kana yakashandiswa zvakanaka neunyanzvi ane ruzivo, inogona kubudirira. Nzira dzinoshandiswa dzinosanganisira kutenga mabhizimisi ekare, kudhinda zvinyorwa, kuvhara, kutengesa mazano uye kugadzirisa hutano hwemagariro evanhu. Grey chikwata SEO inogona kuwana mamwe magwagwa pakutanga, asi izvi hazviwanzoitika nokuti nzvimbo inozopedzisira yabviswa.
Nyaya yeGrey chibharo SEO inonyanya kukakavara sezvo iri yemutemo asi yakashata. Vamwe vanhu vanopikisa kuti Grey SEO haisipo sezvinongoita Black Hat yeSeO mune imwe nzira isina kuoneka. Grey chikwata SEO inogona kuuya nemutengo usingabhadharwi asi maitiro anoshandiswa haana mubvunzo. Kazhinji, SEO vashandi vanoshandisa nzira idzi kuti vabudirire chinangwa (yakakwirira nzvimbo yakatarisa) asi pamutengo wakaderera uye uchishandisa nguva shoma.
Chii chaunonyanya kukoshesa: nokukurumidza uye zvisingabhadharwi asi zvisingazivikanwi kutsvakurudza tsvakurudzo kana zvishoma nezvishoma, chaiyo, kwenguva refu yekukura kwenzvimbo nebhizimisi? Ndiyo ngozi yekushandisa maitiro emhando dzeBlack inofanira kutora here? Iyi ndeimwe yemibvunzo mubhizimisi webasaiti anofanira kuzvibvunza asati agadzirisa pane imwe nzira kana SEO. Apepeti wepaSeO anopa mazano anobatsira anofanira kukubatsira kupindura mibvunzo iyi. Uine ruzivo pamusoro pemhando dze SEO, unogona kuita zvisarudzo zvakajeka pamusoro pewebsite yako uye bhizinesi kuti urege kuita zvikanganiso zvinodhura.